Korona somali - Trondheim kommune
Hjem Korona somali
The content of this page was published on March 12th, and has not been updated since.
For more recent information, please visit these links:
Waxay ku talinaysaa in la baajiyo koorsooyinka, kulamada iyo qabanqaabooyinka
Iyadoo degmadu ku dhaqmaysa mabda’a taxaddarka, waxay maanta ku dhaqaaqday talosiin guud oo khusaysa dhammaan qabanqaabooyinka, koorsooyinka -iyada oo aan loo eegayn tirada dadka - in la baajiyay ama dib loo dhigay muddo aan la cayimin.
-Waa talo cad oo ka timi degmada Trondheim in la baajiyay koorsooyinka, kulamada iyo qabanqaabooyinka iyada oo aan loo eegeyn tirada dadka, ayuu yiri agaasimaha degmo Morten Wolden.
Degmadu way baajisay koorsooyinka iyo kulamada dhexeeda ka jira ee baahida loo qabaa aanay lagama marmaan ahayn. Waa la sii wadayaa hawl maalmeedka laamaha degmada.
Arrintan waxaa lagu iclaamiyey shir jaraa’id oo looga hadlayay xaaladda cudurka korona ee maanta ka jira degmadan Trondheim.
Maanta oo khamiis ah saacadda markay tahay 16.00 ayaa la xirayaa dhammaan goobaha isboortiga ee degmadan Trondheim.
Su’aalaha khuseeya qabanqaabooyinka waxaa lagala xiriirayaa
War cusboonaysiintii ugu danbaysay: 13.03.20.
Talo loo jeedinayo waalidiinta
Dadka uu ku dhaco fayruuska korona in fara badan oo ka mid ahi aad uguma jiradaan. Hase yeeshee carruur badan ayaa cabsan karta kolka ay maqlaan fayruuska korona.
Waa muhim inay waalidiintu carruurta arrintan kala hadlaan oo ay u sheegaan war xaqiiq ah oo cilmi ku salaysan oo khuseeya cudurkan oo ay baraan nadaafadda wacan ee fara dhiqista.
Laga bilaabo khamiista 12ka maarso saacadda 18ka way xiran yihiin dhammaan iskoolada iyo xannaanooyinka carruurta ee degmadan. Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta haya hawlaha bulsho ee lagama maarmaanka ah, iyaga weli deeqdii way u furantahay.
Waxaa kaloo iyana muhim ah inay waalidiintu haddii ay carruurtu jirato, ay guriga ku hayaan si looga hortago inuu cudurku faafo. Haddii laga shakiyo jiritaanka fayruuska korona, waxaa qumman in ilmaha 14 maalmood guriga lagu hayo ama ilaa muddada uu dhakhtarku ku taliyo.
Taleefanka cudurka korona
Ma qabtaa su’aalo khuseeya cudurkan cusub ee koronavirus?
Haddii aad jawaab ka weydo fhi.no waxaad wici kartaa taleefankan: 81555015
Haddii aad isleedahay malaha waad qabtaa, wac dhakhtarkaaga joogtada ah. Haddii ay kuu suurobi weydo inaad dhakhtarkaaga hesho, dhakhtarka degdegga ah (burunto iskoorso) ka wac taleefankan: 116 117.
Degmada Trondheim taleefankeeda warsiintu waa: 905 09 052 (wuxuu furan yahay maalmaha shaqada laga bilaabo saacadda 08.00-19.00)
Degmada Trondheim way xirtay dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurta
Degmada Trondheim way joojisay hawl kasta oo laga qabto dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurta laga bilaabo khamiista 12ka maarso saacadda 18ka.
Sidan waxaa loo sameeyey in laga hortago in cudurka koronavirus uu faafo.
Nasasho: Dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurta ee degmadan way xiran yihiin laga bilaabo khamiista 12ka maarso saacaddu markay tahay 18.
Maantadan la joogo ma jiraan shaqaalaha, aradayda ama carruurta jooga dugsiyada hoose/dhexe iyo xannaanooyinka carruurta ee Trondheim oo uu asiibay cudurkan korona. Machadka caafimaadka dadweynuhu ilaa iyo hadda kuma ay talin in la xiro dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurta. Hase yeeshee degmadu waxay hadda dooratay inay waxdhigistii caadiga ahayd iyo hawlfulintii ka xirto dugsiyada, SFO-ga iyo xannaanooyinka carruurta.
- Xaaladdu sida ay haddan tahay, iyo iyadoo maanka lagu hayo sida wax noqon doonaan, waxaanu ku qasbannahay in aanu sidan yeelno si aanu uga hortagno in cudurka la is qaadsiiyo, ayuu yiri agaasimaha degmada ee Morten Wolden.
Dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurtu way u furan yihiin carruurta ay waalidiintooda iyo kuwa ka mas’uulka ah ee u baahan adeegyada, waayo iyagu waxay fuliyaan hawlo qabashadooda aanay bulshadu ka maarmayn.
- Shaqaalaha dugsiyadeena iyo xannaanooyinkeena carruurtu sidii hore ee caadiga ahayd ayay shaqada u imaanayaan, ayuu Wolden yiri.
Warar dheeraad ah ka akhriso halkan:
Les mer om Helsedirektoratets omfattende tiltak fra torsdag 12. mars her.
Wax su’aalo ah ma qabtaa cudurka korona
Marba marka ka danbaysa way soo badanayaan dadka uu ku dhacay cudurka koronavirus. Waxaanu soo ururinay su’aalaha sida caadiga ah ugu badan ee la iska weydii cudurkan.
Cudurkan covid-19 waxaa la isu qaadsiiya sida hargabka iyo ifilada halkaas oo qofka qabaa uu hawada fayruuska ku gudbiyo. Aqoonta loo leeyahay siyaabaha uu u guurguuro waa wax xaddidan tahay maaddaama uu yahay fayruus cusub, kolkaa talooyinka laga bixiyaa waxaa lagu saleeyay astaamaha lagu yaqaan fayruusyada ugu qabiilka dhow koronvirus. Muddada ugxantiisu ku dillaacdaa waa 5-6 maalmood, laakiinse waxay isu beddeli kartaa 0-14 maalmood.
Hoos ka akhri siyaabaha loo kala qaado iyo geeddi socodka cudurkan.
Sidee looga hortegayaa is qaadsiinta?
Habdhaqan wacan oo loo qufaco iyo nadaafadda faraha oo lagu dadaalo waxay yareeyaan isqaadiinta dhammaan infekshannada neef mareenada, iyo weliba is qaadsiinta fayruuskan cusub ee koronavirus. Marar badan faraha saabuun iyo biyoba si wacan ugu dhaq.
Haddii aanu fara dhaqasho kuu suuroobayn waxaa taas beddelkeeda oo wacan ah daawooyinka gacmaha ee infakshanka dila/aalkolada gacmaha. Ka dheerow in aad wejiga taataabatid. Si toos ah dadka kale ha ugu quficin ama ha ku hindhisin. Ku dadaal inaad tiish ku qufacdid/hindhistis oo kolkaa iska tuur. Taa waxaa labeeya suxulka oo aad soo laabtid. Xad u yeel salaanta gacanta, dhunkashada iyo hab isa siinta.
Wax ma i tarayaa haddii aan xirto marada gafuurka?
Lagu talin maayo in dadka caafimaadka qabaa ay xirtaan marada gafuurka ee aan hayn adeeg caafimaad. Wax aad u yar